Adobe က Post ကိုအစပျိုး: လွယ်ကူပါတယ်လုပ်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Adobe က Post ကိုအစပျိုး: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းလွယ်ကူပါတယ်လုပ်
Adobe က Post ကိုအစပျိုး: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းလွယ်ကူသော APK ကိုဖန်ဆင်းတော်
Adobe က Post ကိုအစပျိုးသည့်ပျော်စရာ, မည်သည့်အခါသမယများအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရပ်ဖစ်ကိုဖန်တီးရန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် - လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှု! သင်ရုံအနည်းငယ်ဘုံဘိုင်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ် tweaks နိုင်ပါတယ်ပညာရှင်ပီသစွာ-ဒီဇိုင်းတင်းပလိတ်များနှင့်အတူစက္ကန့်အတွင်းစတင်ရန်။ သင်၏ဓါတ်ပုံများ Pick အချို့စာသားကို add နှင့်ချက်ချင်းဆင်းလှသောအစ်မ, မျက်စိ-ဖမ်းဂရပ်ဖစ်ကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းစိစစ်မှုများသက်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းကိုထိပုတ်ပါအတွက်လုံးဝအသစ်သောအပြင်အဆင်, အရောင်ပန်းကန်တွေ, စာစီစာရိုက်စတိုင်များသို့မဟုတ် filter များ Explore ။ အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကို wow ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးလူမှုရေးပလက်ဖောင်း, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းများမျှဝေပါ။
ဒါဟာကို Photoshop, Illustrator နှင့် InDesign ရဲ့ဖန်တီးသူကနေ Adobe ကမှော်နှင့်အတူဒီဇိုင်းသစ်တစ်ခုလမ်းပါပဲ။ သငျသညျဖန်တီးအခါတိုင်းနှင့်နေရာတိုင်းမှာလှုံ့ဆော်မှုသပိတ်ဝေမျှနိုင်အောင်သင့်ရဲ့စာတိုက်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့် Android devices တွေကိုဖြတ်ပြီးတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်သင်ပါလိမ့်မယ်အချစ် POST Sparks:
◆ Animated ဗီဒီယို Posts - တစ်ခုမှာကိုထိပုတ်ပါမျက်စိ-ဖမ်းကာတွန်းပို့စ်များကိုဖန်တီးနှငျ့ဗှီဒီယိုကဲ့သို့သူတို့ကိုဝေမျှဖို့
◆ဒီဇိုင်းစိစစ်မှုများ - တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါထဲမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်-ရှာဖွေနေဂရပ်ဖစ်သို့သင်၏စာသားနှင့်ဓာတ်ပုံများ Turn
◆အော်တိုအရွယ်အစားပြောင်း - ခဏဿုံအသီးအသီးလူမှုရေးပလက်ဖောင်း fit ရန်သင့်ဒီဇိုင်းဆိုဒ်ပြောင်းရန်
◆အော်တို Recolor - အသစ်တစ်ခုကိုခံစားဘို့သင့်ဒီဇိုင်း၏အရောင် palette ကိုပြောင်းလဲရန်အသာပုတ်ပါ
◆ကို Magic စာသား - သင်၏စာသား pop စေရန်လှပသောစာစီစာရိုက် Apply! စာသားအရွယ်အစားပြောင်းပါနှင့်မှော်ယင်ကောင်အပေါ်ဖြစ်ပျက်ကိုစောင့်ကြည့်!
◆စာသားအကျိုးသက်ရောက်မှု - အရိပ်, အကြမ်းဖျင်းနှင့်ဖြတ်ထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှု Enhance ။ ကြောက်မက်ဘွယ်သောစာသားစတိုင်များကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ကိုသုံးပါသို့မဟုတ်သူတို့ကိုပေါင်းစပ်
◆ကို Magic Layout - ပြောင်းလဲနေသောအပြင်အဆင်သို့သင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူစာသားကိုပေါင်းစပ်
◆စာသား Cutouts - တစ်ခုတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူသင်၏စာသားကနေတဆင့်နောက်ခံပုံဖော်ပြ
လတ်ဆတ်တဲ့ဒီဇိုင်း၏◆ Remix Feed - Impact, ပညာရှင်ပီသစွာ-ဒီဇိုင်းတင်းပလိတ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏တွေနဲ့စက္ကန့်အတွင်းစတင် Get
◆လက်-Pick Fonts & Shape - တိုင်းအခါသမယ fit မှဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများအားဖြင့်ရွေထားတဲ့
အခမဲ့ပရီမီယံဓါတ်ပုံများ၏◆သန်းနဲ့ချီတဲ့ - app ကိုတိုက်ရိုက်အခမဲ့များအတွက်သန်းအရည်အသွေးမြင့်စတော့ရှယ်ယာဓာတ်ပုံများကျော် Access ကို
နေရာတိုင်းမှာ◆ Sync ကို - သင်သည်သင်၏ဖုန်း, တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏ဒီဇိုင်းကိုစတင်ရန်နှင့်စည်းချက်ပျောက်ဆုံးမရှိဘဲအခြားစက်ကိရိယာပေါ်တွင်ဆက်လက်နိုင်အောင်အရာအားလုံးသည်မိုဃ်းတိမ်မှတက်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေသည်
◆လက်ငင်းမျှဝေခြင်း - အကြာတွင်အဘို့သင့်ဒီဇိုင်းများ Save သို့မဟုတ် Instagram ကို, Facebook, သို့မဟုတ်အခြားလူမှုရေးပလက်ဖောင်းသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုဝေမျှ
https://adobe.ly/2ISYI5U @ သင့်ရဲ့ Creative Cloud ကြေးပေးသွင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူနှင့်အတူရရှိနိုင်သော
◆သင့်အမှတ်တံဆိပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများ Add - အမှတ်တံဆိပ်များ, အရောင်များနှင့်ထုံးစံဖောင့် - သင့်ဒီဇိုင်းများစေရန်ထူးခြားဥစ္စာ
◆ Brandify - ခဏတဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါဆိုစီမံကိန်းများကိုရန်သင့်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်ထား
• Instagram ကို, Facebook, Twitter Pinterest များအတွက်လူမှုရေးသားချက်များ
• Instagram ကို & Snapchat ပုံပြင်များ
•ပိုစတာများ & Flyer
•ဖိတ်စာ & ကြေညာချက်များ
• Event ခေါင်းစီးများ
•ဆလိုက် & တင်ပြချက်များ
• Facebook ကို & Instagram ကိုကြော်ငြာတွေ
• Profile ကိုအဖုံးများ
•ဘလော့ခေါင်းစီး & blog post: နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ
•ပါတီဖိတ်ခေါ်မှု & E-vites
• YouTube ကိုပုံငယ်များ
အဆိုပါအဖွဲ့သည်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားမိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံကယ်နှုတ်ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ဒီမှာလာဖွင့်အဘယျသို့တစ်လြှို့ဝှကျထှကျသှား peek င်ဖြစ်ပါတယ်
• Adobe ကစတော့အိတ်ပေါင်းစည်းမှု
•ညှိယူ Panel ကို
•ပြန်လုပ်ရန် / ပြန်လုပ်ရန်
ကျမတို့ကလည်းဘယ်အင်္ဂါရပ်တွေပျောက်ဆုံးပါသလား? ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုတောင်းဆိုခြင်း: http://bit.ly/postandroiduv
• Instagram / Facebook / Twitter - @AdobeSpark ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Instagram တွင်ဖော်ပြခွင့်ရရန်သင်၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဖန်တီးမှုများကို #AdobeSpark ဖြင့်တံဆိပ်ကပ်ပါ။
Premium တင်းပလိတ်များ [အသစ်] - ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တိုးချဲ့။ အစဉ်အမြဲတိုးချဲ့နေသောပညာရှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတင်းပလိတ်များစုစည်းပါ။ ဒီတင်းပလိတ်များတွင် Adobe Fonts ကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းပါဝင်သည်။ အဆုံးမဲ့ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေများဖြင့်မှုတ်သွင်းပါ။ စတင်ရန်၊ ရွှေအမှတ်သင်္ကေတဖြင့်မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုအသာပုတ်ပါ။
Adobe က Post ကိုအစပျိုး: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းလွယ်ကူပါတယ်လုပ်
30.74 ကို MB
NEONY - စာရေးခြင်း…
လူမှုမီဒီယာ Post ကို ...